Hery Rajaonarimampianina : Filoha voalohany noraisin’ny Amperora Akihoto -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Filoha voalohany noraisin’ny Amperora Akihoto
Nihaona nandritry ny adim-pamantaran’andro iray latsaka ny Amperoran’ny Japon, Sa majésté Akihoto mivady sy ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady, omaly. Midika ho zava-dehibe amin’ity firenena ity ny fandraisan’ny Amperora tahaka izao, satria tsy ny olon-drehetra no afaka mihaona aminy. Manana ny lanjany ambony dia ambony ny Amperora any Japon. Mbola ambonin’ny Praiminisitra izay misahana ny fitantanan-draharaham-panjakana ny toerany.
Voninahitra lehibe ho an’ny Madagasikara araka izany izao fandraisan’ny Amperora Japonais ny filoha malagasy mivady izao. Mariky ny fanamafisana ny fiaraha-miasan’ny tany roa tonta, izay efa nisy hatramin’izay. Ny fandraisan’ny Amperora Japonais, Sa majésté Akihoto moa no namarana ny fitsidihana ara-panjakana nataon’ny delegasiona malagasy tany an-toerana, omaly.
Tsiahivina tokoa fa ny filoha amerikana Donald Trump no isan’ireo filoham-pirenena noraisin’ny Amperora nandritry ny fitsidihana ofisialy nataony tany Japon farany teo. Raha vao miresaka an’izany filoha amerikana izany moa dia mazava avy hatrany fa firenena matanjaka. Kisarin’ny maha zava-dehibe sy maha mavesa-danja ny firenena malagasy ihany koa izao fandraisan’i Amperora ny filoha malagasy izao. Na ny ankabeazan’ireo vahoaka japonais aza mantsy dia mbola tsy nahita maso an’izany Amperorany izany mivantana. Amin’ny fahitalavitra no mba hijereny sy hahitany izany.
Raha ny fantatra, dia tsy ireo filoham-pirenena na filoham-panjakana tonga manao fitsidihana ao Japon rehetra akory no raisin’ity Amperora ity. Hatramin’izay nahazoantsika ny fahaleovantena, efa ho 57 taona izay, dia ny filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina no filoha voalohany noraisin’ny Amperora Japonais. Azo sary an-tsaina amin’izany ny lanjan’ilay filoha malagasy eo anatrehan’ny fifandraisana iraisam-pirenena. Tsy an’ny filoha irery moa ny voninahitra amin’izany fa ho an’ny Malagasy rehetra sy ho an’ny Madagasikara ihany koa.